Webtalk Ajụjụ - WebTK na - tiketi gị WebTalK 🚀 Kpọọ, Nyochaa, Akụkọ & ọzọ 🔥
ga- Webtalk nwere cryptocurrency nke ha?
Webtalk ga-enwe cryptocurrency nke aka ya Webtalk Mkpụrụ ego. Na 2018, Webtalkonye nchoputa RJ Garbowicz kwuru ha na - eme atụmatụ itinye akaụntụ nnwekọrịta niile na Blockchain Technology nwere nkwekọrịta smart ka enwere ike ree ha ma nyefee ya dịka azụmahịa ọ bụla ọzọ. Na-agụ nke a maka ozi ndi ozo banyere Webtalk Ego.
ga- Webtalk nakweere Virtual / Augmented Reality (VR / AR)?
Dabere na ọrụ a, Webtalk na-eme atụmatụ ịrụkọ ọrụ na ya Magic amalinụ Elu, ụlọ ọrụ mmalite nke pụrụ iche na Eziokwu ahụ mepụtara.
Ònye bụ n'azụ Webtalk?
Olee mgbe Webtalk ka a sụgharịa m n'asụsụ m?
Kedu asụsụ mmemme na-eme Webtalk na-eji n'ime?
Webtalk na-eji ihe omuma na Nativescript maka njedebe ihu. Maka njedebe azụ, Webtalk na-adabere na Clojure, Node, OrientDB, NginX, Nkịta, AWS, Beanstalk, S3, Nnu, ElasticSearch na Jenkins.
Category: Nka na ụzụ
Gịnị bụ Webtalk?
Webtalk bụ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-eme ka ịlaghachite nke gị:
O gosiputara ọkachamara di elu na njikwa mmekọrịta onye ukwu ma na enye mmemme mmekorita di egwu di egwu na aha SocialCPX.
Webtalk, Inc. bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na Tampa, Florida, USA. E hiwere ya na 2011 nke RJ Garbowicz, Onye isi ugbu a, yana Jeff Catherell, Andrew Peret, Basit Hussain na Jamie Pews. Site na ijikọ atụmatụ ọkachamara na njikwa netwọkụ nke onwe, Webtalk bu n’obi idochi ma Facebook na LinkedIn.
Webtalk bụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ, data buru ibu na teknụzụ teknụzụ lekwasịrị anya na Ngwuputa data sitere na njikọ, nchekwa na teknụzụ ọchụchọ iji mee ka ọgbọ nkwukọrịta na ngwa ahịa azụmaahịa jụọ.
Site na iji usoro patent-chedo nke echere (AKA SocialCRM), Webtalk enweela ike ịmaliteghachi mmekọrịta mmekọrịta n'ịntanetị site na ahụmịhe onye ọrụ na-enweghị atụ na ụlọ ọrụ. Productmepụta klas ọhụrụ nke ngwaahịa iji jikwaa kọntaktị, nkwukọrịta na ọdịnaya na-enweghị nsogbu, ma ya onwe ya ma ọrụ aka.
Webtalk bu ihe ndi mmadu na acho ime ka ndi mmadu nwee ike ikwu okwu, imekota na itinye aka na ihe omume e-commerce.
dị na Webtalkonye nchoputa Webtalk RJ Garbowicz: “Webtalk bụ ụwa nke amaala nke onye ọrụ na ihe ha chọrọ. Ọ bụ netwọkụ njikwa mmekọrịta, ọ bụ netwọ njikwa nkwukọrịta, ọ bụ kọntaktị njikwa kọntaktị, ọ bụ netwọkụ njikwa ọdịnaya…… n'oge na-adịghịkwa anya, ọ ga-abụ mmekorita, azụmaahịa, netwọkụ njikwa azụmaahịa… ”
Webtalk bu ihe ochucho nke onye ahia ahia dijitalụ.
Webtalk bụ teknụzụ kacha akpata ọgba aghara nke 21st Century. RJ Garbowicz, 2019 / 10 / 03
Webtalk bu otu n’ime ngwugwu ngw’oru ngwa ngwa / ndi mmadu na aru oru ha na intaneti njikwa.
Webtalk na-edozi nsogbu ịntanetị kachasị abụọ n'ụwa:
NJIKỌTA nke kọntaktị, nkwukọrịta na ọdịnaya NA…
Mkpuchi nke mmekọrịta gị, akụkọ, ọdịnaya, nzuzo…
Webtalk bụ ihe dijitalụ na-enye ọrụ ndị a:
Ịkparịta ụka n'Personalntanetị nkeonwe & Ọkachamara
Akwụkwọ Ozi / Nzipu / Akwụkwọ Akụkọ /
CRM / Management Management
Njikwa ọdịnaya / Nchekwa igwe
Ụgwọ / Nyocha / Aro
Ahịa (ngwaahịa / ọrụ / ọdịnaya / ngwa) (Na-abata na-aga)
eCommerce / N'onwe Gị Ebe nrụọrụ weebụ (Na-abịa na njedebe)
Ihe / Meetups / Enyi Onye Nchọta (Na-abata na-aga)
Mgbasa ozi (CPM, CPC, CPA / CPX, CPD, CPV) + Nyocha + KPI (COMING SOON)
Webtalk bụ ngagharị ọhụụ na mmekọrịta azụmaahịa nke na -emekọrịta myirịta na Facebook, LinkedIn na Amazon n'otu n'otu. Onwere mmemme mmekorita mara mma akpọrọ SocialCPX.
Is Webtalk a ojoro?
Anyị ekweghị Webtalk bụ wayo: ụlọ ọrụ dị n’azụ Webtalk dabere na Florida, edebanyela aha ya na Delaware, ọ nọkwa na azụmaahịa kemgbe afọ 8, tinye ego karịrị $ 8M dịka nke 2019.
Webtalk wepụtara ugwo ọrụ mbụ ya na August 2019, Ebe a bụ ihe akaebe ịkwụ ụgwọ n'oge mbụ. Ruo ugbu a, enwebeghị akụkọ banyere kọmitii ndị a na-akwụghị ụgwọ.
gbakwunyere, Webtalk nwere ụkpụrụ siri ike na ihe siri ike ụdị ahịa nke na - akwado otu ojo.
Otu esi esonye Webtalk?
Ọ dị mfe isonye Webtalk. Niile ị chọrọ bụ gaa na banye akwukwo, tinye aha gị, adresị email gị, akara ekwentị, paswọọdụ, na ụbọchị ọmụmụ gị. Iji mezue usoro ndebanye, ị ga-akwado nkwenye email gị. Ka ewere sonye n'agba kacha mma maka Webtalk, gbaa mbọ banye na “STAR” mgbe a jụrụ gị onye kpọrọ gị. Nke a ga - ewetara gị ọtụtụ uru dịka 50% otu egwuregwu ha na-enweta ego ntanetị.
Otu esi esonye Webtalk Stars Team?
Enwere ụzọ 3 iji sonye na Webtalk Stars Team:
Soro ndi otu anyi na aka site na ịbanye Webtalk iji otu n’ime njikọta akwụkwọ ịkpọ òkù anyị ma ọ bụ jiri banye “STAR” mgbe a jụrụ gị onye kpọrọ gị. Njikọ ịkpọ oku anyị bụ webtalk.love ma inwere ike idebanye aha ya site na JLK profaịlụ. Iji jide n'aka na ị na-edebanye aka na ndị otu aka nri, lelee na ala nke ibe ịdebanye aha: ị ga-ahụ obere okwu: "Ntinye Mgbakwunye: kpakpando (6629702)"
Ọ bụrụ n’ị sonye Webtalk n'òtù ozo, inwere ike ibu “onye adabara” nke Webtalk Stars Team by ịkwụ ụgwọ otu oge nke $ 20 dị ka nke taa (ego ga-abawanye ka oge na-aga). Nke ahụ ga-enye gị ọnọdụ nke ndị 2-kpakpando nwere otu uru ahụ nke ndị otu "ala anyị". Kpoo anyi na
ọ bụrụ n’inwere mmasị isonyere otu anyị n'ụzọ a.
Thirdzọ nke atọ isonye na ndị otu anyị, ma ọ bụrụ na ị banyelarịrị Webtalk, ka meere anyị nnukwu ihe, dị ka mgbasa ozi “webtalk.love“N'ụzọ ọrụ arụmọrụ ma na-arụ ọrụ nke ọma, na - ebute opekata mpe iri maka anyị (ihe akaebe chọrọ). Nke ahụ ga-enye gị ọnọdụ nke otu 10-kpakpando niile nwere uru niile metụtara. Kpoo anyi na
Otu esi enweta ego na Webtalk?
Ọ dị mfe iji nweta ya Webtalk: ihe ị chọrọ bụ ịkpọ ndị ọrụ ọhụụ ka ha sonyere iji gị Ozi Ntuziaka njikọ. Then ga - enweta ọrụ 10% na ego niile sitere na ntụgharị maka ndụ gị. Nke a gụnyere:
Isslọrụ ọrụ Pro
Commlọrụ mgbasa ozi
Commlọ ọrụ njem
Kọmitii n'ọma ahịa
Job ọrụ komiti
Storelọ ọrụ na-ere ahịa Swag
Ọzọkwa, ọ bụrụ na i tozuru etozu maka onyinye 5, ị ga-enweta ọrụ 10% na ego niile enwetara site na ntụnye aka gị. Ogbako nke 5 miri emi. Lelee nke anyị online mgbako ka ị tụọ ike ego ị na-enweta.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ma ọ bụrụ na ị nọ na Webtalk Stars Team, ị nwere ike inweta mgbakwunye $ 1,000 kwa ọnwa ma ọ bụrụ na ị kpọọ mmadụ iri ka ọ kpọrọ Webtalk.
Etu esi enweta site na Webtalk Stars Team?
The Webtalk Stars Team is pụrụ iche na ya na ndị otu ya na ndị ọrụ enyemaka na-ekerịta 50% nke ego ya.
Iji kpata ego site na Webtalk Stars Team I kwesiri iji nweta ma ọ dịkarịa ala ọkwa 1-kpakpando:
na- 1 kpakpando ọkwa site n'ịkpọ opekata mpe Ndị ọrụ 2 na-arụ ọrụ* ka Webtalk (ihe akaebe chọrọ); dị ka onye otu 1-kpakpando, ị nwere ike ịtụ anya irite ebe ọ bụla n'etiti $ 10 na $ 100 + kwa ọnwa na 2025 (nkwa adịghị). * (Ọnọdụ dị mma maka afọ 2020)
na- 2 kpakpando ọkwa site n'ịkpọ opekata mpe Ndị ọrụ 10 na-arụ ọrụ* ka Webtalk (ihe akaebe chọrọ); dị ka onye otu 2-kpakpando, ị nwere ike ịtụ anya irite ebe ọ bụla n'etiti $ 100 na $ 1000 + kwa ọnwa na 2025 (nkwa adịghị). * (Ọnọdụ dị mma maka afọ 2020)
na- 3 kpakpando ọkwa site n'ịkpọ opekata mpe Ndị ọrụ 50 na-arụ ọrụ* ka Webtalk (ihe akaebe chọrọ); dị ka onye otu 3-kpakpando, ị nwere ike ịtụ anya irite ebe ọ bụla n'etiti $ 500 na $ 5000 + kwa ọnwa na 2025 (nkwa adịghị). * (Ọnọdụ dị mma maka afọ 2020)
Biko mara na ọnọdụ ị ga - enweta nke ọ bụla n’ime steepụ ndị a bụ naanị ihe dị mma maka afọ 2020. Ọnụ ọgụgụ ntinye aka iji nweta ọnọdụ ahụ ga-abawanye ka oge na-aga. Agbanyeghị, ozugbo enwetara ọkwa ahụ, ọ dị oke nkenke (belụsọ maka nnukwu mmerụ ahụ emere ndị otu anyị).
Ọ bụrụ na ịbanyebeghị Webtalk Stars Team, biko lee Otu esi esonye Webtalk Stars Team.
-eme Webtalk eme atụmatụ iji merie ụwa?
WebtalkIhe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ ime ka akụnaịcha Virtual Economics, dị ka onye guzobere RJ Garbowicz si kwuo. I nwere ike imuta ọtụtụ ihe WebtalkEbumnuche Ebe a na Ebe a.